By Htet Wai Aung - August 08, 2020
J Me သီချင်းထဲက စာသားတချို့ တပိုင်းတစ နားထောင်လိုက်ရတယ်။ ကြောင်တက်နင်းသွားသော စန္ဒရားခလုတ်များတဲ့။ တကယ်လို့ အဲ့ကြောင်က သံစဉ်တွေကိုနားလည်တဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်ရော? နားထောင်လို့ကောင်းမှာပါ။ ကျွန်တော်သိတဲ့ ကြောင်တ‌စ်ကောင်က သံစဉ်တွေကို နားလည်တယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်သံစဉ်ကို သူတီးရမယ် ဆိုတာ ပိုလို့တောင်နားလည်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ကရော? အစကတော့ မသိလို့ပေါ့။ ခုတော့ သူဘယ်သံစဉ်တီးတော့မယ်ဆိုတာတောင် ကြို ခန့်မှန်းတတ်နေပြီ။